လူငယ်နဲ့လူကြီးကြား အမြင်မတူညီမှုတွေကို Drama လေးနဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ Sanam Teri Kasam - MoviesFan Reviews
လူငယ်နဲ့လူကြီးကြား အမြင်မတူညီမှုတွေကို Drama လေးနဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ Sanam Teri Kasam
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ တင်ဆက်ပေးနေကျ Hollywood ရုပ်ရှင်တွေမဟုတ်ပဲ အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးနာမည်ကတော့ Sanam Teri Kasam ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်လိုက်ရင်တော့ My love I swear this on you လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ နာမည်လေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ အချစ်ကားလေးမှန်းတန်းသိကြမှာပါ။
The society ဆိုတဲ့ ရှေးရိုးစွဲလူတွေနေထိုင်တဲ့ အဆောက်အဦးမှာတော့ ဆာရူးနဲ့ သူ့မိသားစုတို့နေထိုင်ကြပါတယ်။ ဆာရူးကတော့ ရိုးရိုးအေးအေးလေးပဲနေတတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီး သူ့ညီမလေးကတော့ လှလှပပခေတ်ဆန်ဆန်ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်နေတတ်သူလေးပါ။ ဆာရူးကို ယောကျာ်းလေးအများစုကမကြိုက်ကြသလို လာကြိုက်တဲ့ယောကျာ်းလေးတွေကိုလည်း ဆာရူးက ပြန်မကြိုက်ခဲ့ပါဘူး။ တစ်ဖက်တည်းမှာလည်း ညီမဖြစ်သူမှာ လက်ထပ်မယ့်သူရှိပေမယ့် မိသားစုထုံးစံအရ အကြီးပြီးမှအငယ် လက်ထပ်ရမယ်ဆိုတာကြောင့် ဆာရူးနဲ့သူ့ညီမလေးကြားမှာ အဖုအထစ်လေးတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာပဲ the society ကို ဂျစ်ကန်ကန် ဟော့ဟော့ရမ်းရမ်းကောင်လေး အင်ဒါရောက်လာပါတော့တယ်။ အင်ဒါနဲ့ဆာရူးတွေ့ကြတဲ့အခါ ဖြစ်လာမယ့်အဖြစ်အပျက်လေးတွေနဲ့ အနေအထိုင်ပွင့်လင်းတဲ့ အင်ဒါ့ကို The society ကလူတွေနှစ်သက်ကြပါ့မလား၊ အင်ဒါ့ရဲ့ နောက်ကြောင်းကရော ဘယ်လိုလဲ? အင်ဒါနဲ့ဆာရူးအဆင်ပြေကြပါ့မလား? ဆိုတာကို ဟာသနည်းနည်း Drama များများနဲ့ဇာတ်ကွက်ပေါ်အောင်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
IMDb 7.3 ရရှိထားတာမို့ ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတော့ ပြောစရာကိုလိုမယ်မထင်တော့ပါဘူး။ Harshvardhan Rane နဲ့ Mawra Hocane တို့က အင်ဒါနဲ့ဆာရူးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး အခြားသရုပ်ဆောင်များစွာလည်းပါဝင်အားဖြည့်ထားပါသေးတယ်။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လူငယ်နဲ့လူကြီးတွေရဲ့ အမြင်မတူညီမှုတွေကိုမီးမောင်းထိုးပြထားတာဖြစ်ပြီး လူကြီးတွေရဲ့ တယူသန်မှုကြောင့် လူငယ်တွေဓားစာခံဖြစ်ကြရပုံကို ဖော်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းလေးကလည်းကောင်းသလို ဖော်ပြပုံလေးလည်းကောင်းတာကြောင့် ကြည့်ကောင်းမယ့်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်သလို မထင်မှတ်ထားတဲ့အလှည့်အပြောင်းလေးတွေရှိတာမို့ မျက်ရည်လွယ်သူတွေ တစ်ရှူးလေးဆောင်ပြီးကြည့်ကြဖို့အကြံပေးလိုက်ရပါတယ်။
Previous Post: Netflix ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ အသစ်မှာ ပါဝင်လာတော့မယ့် Kim So Hyun
Next Post: အသည်းငယ်သူတွေ မကြည့်သင့်တဲ့ The Houses October Built